2 เม.ย. 2563 - 10:51 น.
လူနာအမှတ် ၁၆ နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအရေအတွက် စိစစ်နေ
မြောက်ဥက္ကလာမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ အသက် ၆၃ နှစ်အရွယ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိသူ လူနာအမှတ် ၁၆ နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့ တဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအရေအတွက်ကို အချက်အလက်စုပြီး စိစစ်နေဆဲလို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန် ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံ၊ ကုသရေးနဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေက လူနာနဲ့ထိတွေ့မိခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းအရေအတွက်ကို အချက်အလက်စုဆောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။
လူနာအမှတ် ၁၆ မှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ မြောက်ဥက္ကလာ မြို့နယ်အတွင်းက အိမ်နီးချင်းတွေက လူနာအမှတ် ၁၆သွားလာခဲ့တဲ့ ဈေးတွေ၊ ဆေးရုံမသွားခင်၊ ဆေးခန်း မှာကုသမှုတွေရှိခဲ့တာ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေကိုသွားရောက်ခဲ့တာတွေရှိတာကို လူမှုကွန်ရက် တွေမှာ ရေးသားလာကြပါတယ်။
မြောက်ဥက္ကလာပအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကို ရောက်ရှိကုသ ချိန်မှာ နိုင်ငံခြားကနေ ပြန်လာသူ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ လူနာနောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို ထိန်ချန်ခဲ့တာကြောင့် သာမန်ကုသရေး လူနာဆောင် မှာထားရှိ ကုသပေးခဲ့ရတာကိုလည်း အဲဒီဆေးရုံက ဆရာဝန်အချို့က လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ ရေးသား ခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း မနက်ခင်းသတင်းများ
ရောဂါပိုးရှိတယ်လို့ ထုတ်ပြန်အပြီး ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ အခုလိုရေးသားမှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့် နောက်တရက် ဧပြီ ၂ရက်နေ့မှာတော့ ရေးသားထားတဲ့ စာတွေကို အများစုက ပြန်လည်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။
လူနာအမှတ် ၁၆ ဟာ ဒူဘိုင်းကပြန်လာတဲ့ သားဖြစ်သူကို သွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့ပြီး အဲဒီနောက် ၂ပတ်ကြာ မောပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံစားခဲ့ရပြီး မတ်လ ၃၀ရက်နေ့မှ မြောက်ဥက္ကလာပ ဆေးရုံကိုရောက်ရှိ ကုသခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ဝေဘာဂီကိုပြောင်းရွှေ့ကုသနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လူနာအမှတ် ၁၆ရဲ့ ဇာတိက ဧရာဝတီတိုင်းကလို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူကမြောက်ဥက္ကလာက သားအိမ်မှာနေထိုင်နေရင်း ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စိစစ်နေပြီး ရရှိလာတဲ့အချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ့်အခြေအနေတွေကို ထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
၂၀၂၀ ခန့်မှန်းလူဦးရေစာရင်းအရ ၅နှစ်အတွင်း မြန်မာလူဦးရေ ၃သန်းတိုး
၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလ၊ ၁ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံလူဦးရေးက ၅၄သန်းခွဲကျော်ရှိတယ်လို့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနက ဧပြီလ ၂ရက်မှာခန့်မှန်းထုတ်ပြန် ပါတယ်။
အဲဒီခန့်မှန်းခြေလူစာရင်းကို ၂၀၁၄ခုနှစ်ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့ လူဦးရေစာရင်း ၅၁.၄ သန်းအပေါ် အခြေခံပြီး တွက်ချက်ထားတာလို့လည်း ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အဲဒီခန့်မှန်လူဦးရေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ် ၂၀၁၄ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူတဲ့အချိန်ကအရေအတွက်ထက် လူဦးရေ ၃သန်းပိုများလာပါတယ်။
အခုလိုတိုးလာတဲ့လူဦးရေတွေထဲမှာ ရန်ကုန်မှာတော့ အရင်ထက် လူဦးရေ ၁သန်းကျော်တိုး လာပါတယ်။ အခြားပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းတွေမှတော့ လူဦးရေ သိန်းကျော်စီနဲ့ အနည်းငယ်စီတိုးလာတာလည်းရှိပါတယ်။
သန်းခေါင်စာရင်း လူတသန်း ကျန်နေ
လူဦးရေအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ကယားပြည်နယ်မှာပင် လူဦးရေ ၅သောင်းလောက်ထပ်တိုးလာပါတယ်။
လက်ရှိစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ ၂၀၁၄ခုနှစ် သန်းခေါင်းစာရင်းရှိ လူဦးရေထက် ၂ သိန်းကျော် လျော့နည်းသွားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
နှစ်ဖက်စလုံးကကျယ်ပြန့်သောသဘောတူညီမှုရရှိပြီးပေမယ့် အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ ကိုတော့လက်မှတ်မထိုးရသေးပါဘူး။
ဗြိတိသျှ လေကြောင်းလိုင်း BA ရဲ့ ဝန်ထမ်းသုံးသောင်းကျော်ကို အလုပ်ခေတ္တရပ်ဆိုင်းမယ်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုတွေမြင့်မားနေသလို၊ သေဆုံးမှုနှုန်းတွေလည်း မြင့်နေတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ ဗြိတိသျှ လေကြောင်းလိုင်း BA က သူတို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေထဲက သုံးသောင်းခြောက်ထောင်လောက်ကို အလုပ်ကနေ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းရဖို့ရှိနေပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပြဿနာကြောင့် လုပ်သားတွေလျော့ချဖို့အတွက် Unite the Union ဆိုတဲ့အလုပ်သမားကိစ္စတွေ ဖြေရှင်းပေးတဲ့ အဖွဲ့နဲ့ ဗြိတိသျှ လေကြောင်းလိုင်းတို့ ၂ ပတ်ကြာ ဆွေးနွေးခဲ့ရပါတယ်။
သဘောတူချက်အရ BA လေယာဉ်အမှုထမ်း ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်၊ မြေပြင် ၀ န်ထမ်းတွေ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ ရုံးချုပ်ကအလုပ်သမားတွေကို အလုပ် ဆိုင်းငံ့ထားမှာဖြစ်ပေမယ့်လည်း အခြားနောက်ထပ် ဝန်ထမ်းတွေ ကိုထပ်လျော့ဖို့ မမျှော်လင့်ထားပါဘူး။
ကိုဗစ်၁၉-ဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတုန်း ယူအန်ဝန်ထမ်းရဲ့ဖခင် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု မရှိခဲ့လို့ ဆို
လေကြောင်းလိုင်းအကျပ်အတည်းမပြီးမချင်း Gatwick နှင့် London City လေဆိပ် တည်နေရာ နှစ်ခုလုံးကိုရပ်နားပြီး အဲဒီကဝန်ထမ်းတွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှာပါ။
ထိခိုက်နစ်နာသူတွေကတော့ အစိုးရက ထောက်ပံ့တဲ့အစီအစဉ်အောက်ကနေ သူတို့ရဲ့ လစာရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း တလကိုပေါင် ၂၅၀၀ေ လာက်အထိပြန်လည်ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။